Kooxaha jihaad doonka ah oo lugu baaqayo in lagala noqdo dhalashada iswiidhish-ka | Somaliska
Kooxaha jihaad doonka ah oo lugu baaqayo in lagala noqdo dhalashada iswiidhish-ka
In laga hor tago kooxaha jihaad doonka ah ee dalka dib ugu soo laabta, waa mid ku haboon in lagala noqda dhalasha iswiidhish-ka ah, sidaasi waxaa aamisan ama doonaya Erik Nord, oo ah madaxa ugu sareeya booliska gobolka Göteborg.
“Haddaad dooneeysaan in fariin loo diro kuwa dalka dibadiisa aada ee dembi ka soo gala caalamka daafihiisa,waad sameey kartaan laakin dalka kuma soo laaban karaan. Waxaa markaa suuragal ah in sharciga lala tiigsado. Haddaan la dooneyn taana waa in markaa inta meel la fariisto lana rajeeyo in ay wax dhacaan. Waxaan ka wel welsanahay marka ay kooxahaasi soo laabtaan. Waxaana wanagasan ineeysan soo laaban” ayuu yiri Erik Nord.
Hase ahaatee waxaa baaqa madaxa booliska Göteborg si ka duwan u arka Hans Brun oo ah qabiir arrimaha kooxaha xagjirka ah.
“Dhibtaada waa dhalashada oo ah xaquuq dowladeed, waana in la galo qeyb ka mid ah sharuucda dalka waxaana ay qaadaneeysa waqti dheer iyo labbo go’aan oo u dhaxeeyo hal doorasho. Waqtigaana lama hayo, waxaan aaminsanahay in xaalada noocaana aho oo loo maraa dhalashada dalka eeysan keeneyn xal waqtina qaadaneyso” ayuu yiri Hans Brun oo ka guuxay fikirka uu qabo madaxa booliska gobolka Göteborg ee la xirriira kooxaha jihaad doonka ah ee heeysta dhalashada Iswiidhan.
Lixdii sanno ee ugu dambeeysay ayaa in ka badan 300 oo ka mid ah kooxahaasi waxaa ay ka dhoofeen dalka si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalamaya waqooyiga Suuriya sida ay cadeeyeen ciidanka ammaanka Iswiidhan ee Säpo. Dhinaca kalena idaacadda Iswiidhan ayaa maanta shaaca ka qaaday in dhowr qof oo kooxahaasi ka mid ah ay gacanta ku dhigeen xooggaga kurdiyiinta maamusho ee Suuriya.
Wixii ka dambeeyey weerarkii Stockholm ka dhacay bishii abriil ee sanadkan, waxaa Erik Nord uu horey ugu baaqay in dadyowga taagera kooxaha xagjirka ah lagala noqdo sharci ku jooga Iswiidhan, iyadoo haatana uu fikirkiisi hore ku dabaqay in laga ceshto dhalashada dalka kooxaha argagaxisada ah.
“Arinkani muxuu sharciga ka leeyahay, aniga waxaan qabaa in eeysan taagneyn heerka wel wel ee askari ciidan ahi qabo, waa mid tilmaameeysa rabitaan yari jirta.” Sidaas waxaa hadana hadalka u yiri Hans Brun oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha kooxaha mayalka adag.
Ugu dambeyntiina Erik Nord waxaa uu tilmaamay in dalka Ingiriiska uu jiro fikir ah in dhalashada dalkaasi lagala laabto kooxaha jihaad doonka ah ee Daacish, kuwaas oo ku soo laabta Ingiriiska, iyo sida sharciga dalkaasi wax looga badalo. Hadii taas ay reer Ingiriis ku guuleeystaana ay dhici karto in markaa Iswiidhana qaadeyso talaabo la mid ah.
Shir ku saabsan körkortka oo ka dhacay Malung-Sälen